အိပ်ခြင်း နှင့် နိုးခြင်း အကြောင်းပြောဆိုခြင်း - Myanmar Network
အိပ်ခြင်း နှင့် နိုးခြင်း အကြောင်းပြောဆိုခြင်း
Posted by Language Republic on August 12, 2015 at 11:24 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျန်းမာသော လူနေမှုဘဝ တစ်ခုအတွက် သင်သည် တစ်ညလျှင် (၈) နာရီကြာ အိပ်သင့်သည်ဟု ဆရာဝန်များစွာတို့က ပြောကြပါသည်။ အိပ်ရာမဝင်ခင် သင်သည် အလွန်အကျူး မစားထားသင့် (သို့) အရက်မသောက်ထားသင့်ပါ။ ၎င်းအပြင် သင် သည် အိပ်ရာမဝင်မီ အနည်းဆုံး (၁) နာရီခန့် ကွန်ပျူတာ (သို့မဟုတ်) အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတစ်ခုခု အသုံးမပြုသင့်ပါ။ သင်၏ အိပ်ခန်းကို တယ်လီဗေးရှင်း များ၊ ကွန်ပျူတာများသို့မဟုတ် လင်းထိန်သောမီးအလင်းရောင်များ မရှိသည့် ငြိမ်းချမ်းသောနေရာကလေးဖြစ်စေရန် ကြိုးစား၍ပြုလုပ်ပါ။ ဤကဲ့သို့ ပြုလုပ်ထားခြင်းသည် သင့်အား ပိုမို၍လွယ်ကူစွာ အိပ်ပျော်သွားစေရန်နှင့် ပိုမို၍နက်ရှိုင်းစွာ အိပ်မောကျစေရန် ကူညီပေးကောင်း ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်သည် အားအင်ပြည့်ဝစွာနှင့် အိပ်ရာမှ နိုးလာမည်ဖြစ်ပြီး၊ လန်းဆန်းစွာ ခံစားရလျှက် အိပ်ရာမှထလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ အင်္ဂလိပ်စာဝေါဟာရသင်ခန်းစာအတွက် အိပ်ခြင်းနှင့် အိပ်ရာမှ နိုးခြင်းတို့အကြောင်း ပြောဆိုသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုသော စကားလုံးများနှင့် စကားလုံးစုများထဲက အချို့ကို အောက်ပါတွင် ရှင်းပြထားပါသည်။
Go to bed (အိပ်ရာဝင်သည်) သည် လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ enter the bed (အိပ်ရာထဲသို့ဝင်သည်) ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။
Last night I went to bed and read my book foralittle while. (မနေ့ညက ကျွန်ုပ်အိပ်ရာဝင်ပြီး ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်ကို အချိန်အနည်းငယ် ဖတ်ခဲ့ပါသည်။)
I usually go to bed at 11:00 pm. (ကျွန်ုပ်များသောအားဖြင့် ည (၁၁)နာရီတွင် အိပ်ရာဝင်ပါသည်။)
Go to sleep သို့မဟုတ် fall asleep (အိပ်ပျော်သွားသည်) တို့သည် သင်၏မျက်စိများ ကို ပိတ်လိုက်ပြီး awake (နိုးနေသော) အနေအထားမှ asleep (အိပ်ပျော်နေသော) အနေအထားသို့ ရောက်ရှိသွားသော ဖြစ်စဉ်ကို ဆိုလိုပါသည်။
Last light I went to sleep as soon as my head hit the pillow. (မနေ့ညက ခေါင်းက ခေါင်းအုံးနှင့် ထိလျှင်ထိခြင်းပဲ ကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။)
I am so tired I could fall asleep right now. (ကျွန်ုပ် ပင်ပန်းလွန်းလို့ ယခုပင် အိပ်မောကျသွားနိုင်ပါတယ်။)
အင်္ဂလိပ်စာကိုမိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် သုံးစွဲသူများစွာသည် go to bed (အိပ်ရာဝင်သည်)၊ go to sleep (အိပ်ပျော်သွားသည်) နှင့် fall asleep (အိပ်ပျော်သွားသည်) တို့ကို အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြား မှုအနည်းငယ်နှင့်သာ သုံးစွဲနေကြကြောင်း သတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့် များစွာသော လူတို့အတွက် I went to bed at 10. (ကျွန်ုပ် ၁ဝ နာရီတွင် အိပ်ရာဝင်သည်။) နှင့် I went to sleep at 10. (ကျွန်ုပ် ၁ဝ နာရီတွင် အိပ်ပျော်သည်။) တို့သည် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
sleep (အိပ်သည်) သည် အိပ်ပျော်နေသောအခြေအနေကို ဆိုလိုပါသည်။
I usually sleep for just6hours per night. (ကျွန်ုပ်သည် တစ်ညလျှင် ၆နာရီခန့် များသောအားဖြင့် အိပ်ပါသည်။)
Jack said he always sleep for 8 hours. (ဂျက်(စ်)က သူအမြဲတမ်း ၈နာရီကြာအိပ်သည်ဟု ပြောပါသည်။)
Wake up (နိုးလာသည်) သည် သင့်မျက်လုံးများပွင့်လာပြီး၊ asleep (အိပ်ပျော်နေသော)အခြေအနေမှ awake (နိုးနေသော) အနေအထာသို့ ရောက်ရှိသွားသောဖြစ်စဉ်ကို ဆိုလိုပါသည်။
I usually wake up at 6:15 am. (ကျွန်ုပ် မနက် ၆နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာ များသောအားဖြင့် အိပ်ရာနိုးပါသည်။)
What time did you wake up this morning? (ဒီမနက် ဘယ်နှစ်နာရီမှာ သင်အိပ်ရာက နိုးပါသလဲ။)
Get up (အိပ်ရာထသည်) သည် အိပ်ရာမှ ခွာထွက်လာသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။
I woke up at 6:15, but I didn’t get up until 7:00. (ကျွန်ုပ် မနက် ၆နာရီ ၁၅မိနစ်တွင် အိပ်ရာနိုးပါသည်။ သို့သော် ၇-နာရီထိ အိပ်ရာမထခဲ့ပါ။)
I didn’t want to get up this morning. (ကျွန်ုပ် ဒီနေ့မနက်အိပ်ရာမထချင်ပါ။)
ဤနေရာတွင်လည်းပဲ အင်္ဂလိပ်စာမိခင်ဘာသာစကားအဖြစ် သုံးစွဲသူများစွာတို့သည် wake up နှင့် get up ကို အဓိပ္ပာယ်ကွဲလွဲမှုအနည်းငယ်မျှနှင့်သာ သုံးနေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူများစွာတို့အတွက် I woke up at 8. (ကျွန်ုပ် ၈-နာရီတွင် အိပ်ရာနိုးသည်။) နှင့် I got up at 8. (ကျွန်ုပ် ၈ နာရီတွင် အိပ်ရာထသည်။) တို့သည် အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
Stay up ဆိုသည်မှာ နောက်ကျသောအချိန်တစ်ခုအထိ မအိပ်ဘဲ နေနေခြင်းကို ဆိုလို ပါသည်။
I stayed up until 1.00 am to watch the Olympics. (ကျွန်ုပ်သည် အိုလံပစ်ပွဲများ ကြည့်ရန် ည ၁-နာရီအထိ မအိပ်ဘဲနေသည်။)
We like to stay up late on the weekends . (ကျွန်ုပ်တို့သည် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် နောက်ကျချိန်အထိ မအိပ်ဘဲ နေနေတာကို နှစ်သက်ကြသည်။)
Sleep late (သို့) sleep in (နောက်ကျသောအချိန်အထိ အိပ်ခြင်း) သည် မနက်စောစောမထခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
I like to sleep late on the weekend. (ကျွန်ုပ်သည် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် နေမြင့်သည်အထိ အိပ်ရတာကြိုက်တယ်။)
I'm off tomorrow, so I think I’ll sleep in. (မနက်ဖြန် ကျွန်ုပ်အလုပ်အားရက်၊ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်နေမြင့်သည်အထိ အိပ်မည်ဟု စဉ်းစားသည်။)
Oversleep (ပို၍ အိပ်မိသည်) ဆိုသည်မှာ သင်သည် မမျှော်လင့်ဘဲ သင် ထရမည့်အချိန်ထက် ပိုနောက်ကျစွာ အိပ်မိသောအခါမျိုးဖြစ်ပါသည်။
I overslept this morning and was late for work. (ကျွန်ုပ် ဒီမနက် ပိုအိပ်မိလိုက်ပြီး၊ အလုပ်နောက်ကျခဲ့ပါတယ်။)
Be careful not to oversleep. We have an 8:00 meeting in the morning. (အိပ်ပျော်မလွန်သွားအောင် သတိထားဦး။ ကျွန်ုပ်တို့ မနက် ၈နာရီတွင် အစည်းအဝေးရှိတယ်။)
သင်သည် အလွန်ကောင်းစွာနှင့် နက်ရှိုင်းစွာအိပ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ် ရသော sleep likealog (သစ်လုံးတစ်လုံး ကဲ့သို့ အိပ်သည်) ဟူသော idiom ကိုလည်း အaသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
I was so exhausted I slept likealog last night. (ကျွန်ုပ်မနေ့ညက အလွန်ပင်ပန်းလွန်းလို့ သစ်လုံးတစ်လုံးကဲ့သို့ အိပ်မောကျခဲ့ပါသည်။)
My dog didn't notice the thunderstorm because she was sleeping likealog. (ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည် မိုးသက်မုန်တိုင်းကျသည်ကို သတိမပြုမိခဲ့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမသည် သစ်လုံး တစ်လုံးကဲ့သို့ အိပ်နေခဲ့လို့ပါဘဲ။)
Blog.myhappyenglish.com မှ Micheal ၏ Talking about Sleeping and Waking ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျနျးမာသော လူနမှေုဘဝ တစ်ခုအတွကျ သငျသညျ တဈညလျှငျ (၈) နာရီကွာ အိပျသငျ့သညျဟု ဆရာဝန်များစွာတို့က ပြောကွပါသညျ။ အိပျရာမဝင်ခငျ သငျသညျ အလွနျအကျူး မစားထားသငျ့ (သို့) အရက်မသောက္ထားသငျ့ပါ။ ၎င်းငျးအပြငျ သငျ သညျ အိပျရာမဝင်မီ အနညျးဆုံး (၁) နာရီခနျ့ ကွန်ပျူတာ (သို့မဟုတျ) အီလက္ထေရာနစ်ပစ်စညျးတစ်ခုခု အသုံးမပြုသငျ့ပါ။ သငျ၏ အိပ်ခနျးကို တယ်လီဗေးရှငျး များ၊ ကွန်ပျူတာများသို့မဟုတျ လငျးထိနျသောမီးအလငျးရောင်များ မရှိသညျ့ ငွိမျးချမျးသောနရောကလေးဖြဈစရေနျ ကွိုးစား၍ပြုလုပ်ပါ။ ဤကဲ့သို့ ပြုလုပ္ထားခြငျးသညျ သငျ့အား ပိုမို၍လွယ်ကူစွာ အိပျပျောသွားစရေန်နှငျ့ ပိုမို၍နကျရှိုငျးစွာ အိပျမောကျစရေနျ ကူညီပေးကောငျး ကူညီပေးနိုင်ပါလိမျ့မညျ။ သငျသညျ အားအငျပြညျ့ဝစွာနှငျ့ အိပျရာမှ နိုးလာမညျဖြဈပွီး၊ လနျးဆနျးစွာ ခံစားရလျှကျ အိပျရာမှထလာနိုင်မညျဖြဈသညျ။
ယနေ့ အဂင်ျလိပ်စာဝေါဟာရသင်ခနျးစာအတွကျ အိပျခြငျးနှငျ့ အိပျရာမှ နိုးခြငျးတို့အကွောငျး ပြောဆိုသောအခါ ကနြွုပ်တို့ အသုံးပြုသော စကားလုံးများနှငျ့ စကားလုံးစုများထဲက အချို့ကို အောက်ပါတွငျ ရှငျးပြထားပါသညျ။
Go to bed (အိပျရာဝငျသညျ) သညျ လုပျရပ်တစ်ခုဖြဈပွီး၊ enter the bed (အိပျရာထဲသို့ဝငျသညျ) ဟု အဓိပ်ပာယျရပါသညျ။
Last night I went to bed and read my book foralittle while. (မနေ့ညက ကြွနျုပျအိပျရာဝငျပွီး ကြွနျုပျ၏စာအုပ်ကို အချိနျအနညျးငယျ ဖတ်ခဲ့ပါသညျ။)
I usually go to bed at 11:00 pm. (ကြွနျုပ်များသောအားဖြငျ့ ည (၁၁)နာရီတွငျ အိပျရာဝင်ပါသညျ။)
Go to sleep သို့မဟုတျ fall asleep (အိပျပျောသွားသညျ) တို့သညျ သငျ၏မျက်စိများ ကို ပိတ်လိုကျပွီး awake (နိုးနေသော) အနေအထားမှ asleep (အိပျပျောနေသော) အနေအထားသို့ ရောကျရှိသွားသော ဖြစ်စဉ်ကို ဆိုလိုပါသညျ။
Last light I went to sleep as soon as my head hit the pillow. (မနေ့ညက ခေါငျးက ခေါငျးအုံးနှငျ့ ထိလျှင္ထိခြငျးပဲ ကြွနျုပျအိပျပျောသွားပါတယျ။)
I am so tired I could fall asleep right now. (ကြွနျုပျ ပင်ပနျးလွနျးလို့ ယခုပငျ အိပျမောကျသွားနိုင်ပါတယျ။)
အဂင်ျလိပ်စာကိုမိခင်ဘာသာစကားအဖြဈ သုံးစွဲသူများစွာသညျ go to bed (အိပျရာဝငျသညျ)၊ go to sleep (အိပျပျောသွားသညျ) နှငျ့ fall asleep (အိပျပျောသွားသညျ) တို့ကို အဓိပ်ပာယ်ကွဲပြား မှုအနညျးငယ်နှငျ့သာ သုံးစွဲနွကေကွောငျး သတိပြုပါ။ ထို့ကွောငျ့ များစွာသော လူတို့အတွကျ I went to bed at 10. (ကြွနျုပျ ၁ဝ နာရီတွငျ အိပျရာဝငျသညျ။) နှငျ့ I went to sleep at 10. (ကြွနျုပျ ၁ဝ နာရီတွငျ အိပျပျောသညျ။) တို့သညျ အတူတူပငျဖြစ်ပါသညျ။
sleep (အိပျသညျ) သညျ အိပျပျောနေသောအခြေအနေကို ဆိုလိုပါသညျ။
I usually sleep for just6hours per night. (ကြွနျုပျသညျ တဈညလျှငျ ၆နာရီခနျ့ များသောအားဖြငျ့ အိပ်ပါသညျ။)
Jack said he always sleep for 8 hours. (ဂျကျ(ဈ)က သူအမွဲတမျး ၈နာရီကွာအိပျသညျဟု ပြောပါသညျ။)
Wake up (နိုးလာသညျ) သညျ သငျ့မျက်လုံးများပွငျ့လာပွီး၊ asleep (အိပျပျောနေသော)အခြေအနေမှ awake (နိုးနေသော) အနေအထာသို့ ရောကျရှိသွားသောဖြစ်စဉ်ကို ဆိုလိုပါသညျ။
I usually wake up at 6:15 am. (ကြွနျုပျ မနကျ ၆နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာ များသောအားဖြငျ့ အိပျရာနိုးပါသညျ။)
What time did you wake up this morning? (ဒီမနကျ ဘယ်နှစ်နာရီမှာ သငျအိပျရာက နိုးပါသလဲ။)
Get up (အိပျရာထသညျ) သညျ အိပျရာမှ ခွာထွက်လာသညျဟု ဆိုလိုပါသညျ။
I woke up at 6:15, but I didn’t get up until 7:00. (ကြွနျုပျ မနကျ ၆နာရီ ၁၅မိနစ်တွငျ အိပျရာနိုးပါသညျ။ သို့သျော ၇-နာရီထိ အိပျရာမထခဲ့ပါ။)
I didn’t want to get up this morning. (ကြွနျုပျ ဒီနမေ့နကျအိပျရာမထချင်ပါ။)
ဤနရောတွင်လညျးပဲ အဂင်ျလိပ်စာမိခင်ဘာသာစကားအဖြဈ သုံးစွဲသူများစွာတို့သညျ wake up နှငျ့ get up ကို အဓိပ်ပာယ်ကွဲလွဲမှုအနညျးငယ်မျှနှငျ့သာ သုံးနကွေပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ လူများစွာတို့အတွကျ I woke up at 8. (ကြွနျုပျ ၈-နာရီတွငျ အိပျရာနိုးသညျ။) နှငျ့ I got up at 8. (ကြွနျုပျ ၈ နာရီတွငျ အိပျရာထသညျ။) တို့သညျ အတူတူပငျဖြစ်ပါသညျ။
Stay up ဆိုသည်မှာ နောက်ကျသောအချိန်တစ်ခုအထိ မအိပ်ဘဲ နေနေခြငျးကို ဆိုလို ပါသညျ။
I stayed up until 1.00 am to watch the Olympics. (ကြွနျုပျသညျ အိုလံပစ်ပွဲများ ကွညျ့ရနျ ည ၁-နာရီအထိ မအိပ်ဘဲနသေညျ။)
We like to stay up late on the weekends . (ကြွနျုပ်တို့သညျ စနေ၊ တနငေ်ျဂနွနေ့များတွငျ နောက်ကျချိနျအထိ မအိပ်ဘဲ နေနေတာကို နှဈသကျကွသညျ။)
Sleep late (သို့) sleep in (နောက်ကျသောအချိနျအထိ အိပျခြငျး) သညျ မနကျစောစောမထခြငျးကို ဆိုလိုပါသညျ။
I like to sleep late on the weekend. (ကြွနျုပျသညျ စနေ၊ တနငေ်ျဂနွနေ့တွငျ နမြေငျ့သညျအထိ အိပျရတာကွိုက်တယျ။)
I'm off tomorrow, so I think I’ll sleep in. (မနကျဖြနျ ကြွနျုပျအလုပျအားရကျ၊ ဒါကွောငျ့ ကြွနျုပျနမြေငျ့သညျအထိ အိပ်မညျဟု စဉျးစားသညျ။)
Oversleep (ပို၍ အိပ်မိသညျ) ဆိုသည်မှာ သငျသညျ မမျှေ်လာငျ့ဘဲ သငျ ထရမညျ့အချိန္ထကျ ပိုနောက်ကျစွာ အိပ်မိသောအခါမျိုးဖြစ်ပါသညျ။
I overslept this morning and was late for work. (ကြွနျုပျ ဒီမနကျ ပိုအိပ်မိလိုကျပွီး၊ အလုပျနောက်ကျခဲ့ပါတယျ။)
Be careful not to oversleep. We have an 8:00 meeting in the morning. (အိပျပေ်ျမာလွနျသွားအောငျ သတိထားဦး။ ကြွနျုပ်တို့ မနကျ ၈နာရီတွငျ အစညျးအဝေးရှိတယျ။)
သငျသညျ အလွနျကောငျးစွာနှငျ့ နကျရှိုငျးစွာအိပျသညျဟု အဓိပ်ပာယျ ရသော sleep likealog (သစ်လုံးတစ်လုံး ကဲ့သို့ အိပျသညျ) ဟူသော idiom ကိုလညျး အaသုံးပြုနိုင်ပါသညျ။
I was so exhausted I slept likealog last night. (ကြွနျုပ်မနေ့ညက အလွန်ပင်ပနျးလွနျးလို့ သစ်လုံးတစ်လုံးကဲ့သို့ အိပျမောကျခဲ့ပါသညျ။)
My dog didn't notice the thunderstorm because she was sleeping likealog. (ကြွနျုပျ၏ခွေးသညျ မိုးသက်မုန်တိုငျးကျသည်ကို သတိမပြုမိခဲ့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမသညျ သစ်လုံး တစ်လုံးကဲ့သို့ အိပျနခေဲ့လို့ပါဘဲ။)
Blog.myhappyenglish.com မှ Micheal ၏ Talking about Sleeping and Waking ကို ကိုးကားဘာသာပြန္ဆိုထားခြငျးဖြစ်ပါတယျ။
မူရငျးဆောငျးပါးကို ဤနရောတွငျ ဖတျရှုနိုင်ပါတယျ။
"အမေရိကား(America) နှင့် ဗြိတိန် (Britain) တို့သည် ဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းက ခွဲခြားထားခြင်း ခံရသည့် နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ George Bernard Shaw က ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ တကယ်တော့ ခြားနားချက်တွေဟာ အတော်အတန်နည်းပြီး ယခုအခါ သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာတွေ မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုနည်းပါးလာပါသည်။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့ ကွာဟချက်တွေ ကတော့ ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုကွာခြားတယ်ဆိုတာကို ယခုဆောင်းပါးမှာ British Council မှ ဆရာ Guy Perring ကရှင်းပြထားပါတယ်။
ကရာတေး ကျွမ်းကျင်သူတွေက “ကရာတေးနိ ဆန်း တေ နရှိ” “ကရာတေးမှာ ကိုယ်ကစပြီး တိုက်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး” ဆိုတဲ့ ဂျပန်ဆိုရိုးစကားကို ကျင့်သုံးကြတယ်။ အမျက်ဒေါသနဲ့ မတိုက်ရပါဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် kata လို့ခေါ်တဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ တိုက်ကွက်အားလုံးက ခုခံပိတ်ဆို့မှုနဲ့ စတင်ပါတယ်။ စာရေးသားရာမှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဒေါသတကြီးနဲ့ စာ၊ အီးမေးလ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် SMS ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် အမျက်ဒေါသကြောင့် စိတ်မကြည်လင်ဘဲ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်တာလည်း ပျောက်ကွယ်နေတဲ့အတွက် ဦးတည်ချက်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၁၅ ရာစု အကုန်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားက နိုင်ငံသုံးဘာသာဖြစ်လာပါပြီ။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံတွေ ပိုပြီး တစ်ပြေးညီဖြစ်လာပါတယ်။ သို့သော် ယနေ့သုံးနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ တူလာတာကတော့ ၁၆ ရာစုကျမှပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၅၂၄ ခုနှစ်မှာ William Tyndale လို့ခေါ်တဲ့ အောက်စဖို့ scholar ပညာရှင်တစ်ဦးက ရိုမန်ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းရဲ့ တားမြစ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး သမ္မာကျမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ သမ္မာကျမ်းမှာ ပထမဦးဆုံးဖော်ပြခဲ့တဲ အားကောင်းတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်း အတော်များများကို အခုထက်ထိ အသုံးပြုနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ “the powers that be”, သြဇာအာဏာ ရှိသူများ၊ “the apple of his eye”, ချစ်ခင်နှစ်သက်သောသူ၊ “a man after his own heart”, စိတ်သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်သူ၊ “the spirit is willing but the flesh is weak”, စိတ်ကတော့ ဆန္ဒရှိပေမယ့် ခန္ဓကိုယ်က မလိုက်နိုင်၊ “broken-hearted”, အသည်းကွဲနေသော၊ “stumbling block”, ရှေ့မတိုးနိုင်အောင် ပိတ်နေသော အတားအဆီး ၊ “eat, drink and be merry”, စားသောက်ပြီး ပျော်ပျော်နေ ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by oo kyaw khaing on August 15, 2015 at 18:09
Permalink Reply by British Council Customer Service on August 31, 2015 at 11:29
ဟုတ်ကဲ့၊ မူရင်းဆောင်းပါးများကို (ဤနေရာတွင်) လုပ်ပါဆိုတဲ့နေရာတွင် ကြည့်ရှူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Nangyu on August 18, 2015 at 17:20
သင်ခန်းစာများ download လုပ်နည်းရှိရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ရှင်းပြပေးပါရှင့်
Permalink Reply by British Council Customer Service on August 31, 2015 at 11:30
Permalink Reply by Zonthiyar on August 20, 2015 at 20:40
i has already got lot of knowledge from you.
Permalink Reply by British Council Customer Service on August 31, 2015 at 10:29
Thank you, our posts are useful for you and enrich your knowledge....Thanks
Permalink Reply by khainggyigyikhaing@gmail.com on October 31, 2015 at 17:15
thank for your post.l'd like to your post